WTM Africa Reigniting Africa Travel & Tourism Awardee Cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Awards » WTM Africa Reigniting Africa Travel & Tourism Awardee Cusub
Awards • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska
Abaalmarinta WTM Africa
WTM Africa waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo in shirkadda safarka ee khibradda leh iyo wixii ka dambeeya ay tahay guuleystaha Abaalmarinta Reigniting Africa Travel & Tourism Awards. Kaalinta labaad waa Cape Nature, halka Farshaxanka Ilaalinta Penguin uu helay xushmad sharaf leh.
andBeyond waxay qaadataa Abaalmarinta Safarka & Dalxiiska ee Reigniting Africa iyada oo leh olole dhiirrigelin leh WILDwatch.
Suuqa Socdaalka Aduunka Qeybtiisa “Reigniting Africa” wuxuu qirayaa ololaha ugu saameynta badan, sheekadu wadato oo wanaagsan.
Ololuhu wuxuu arkay toos toos ah laba jeer maalin walba saddex saacadood oo safaro toos ah si loogu noolaado Afrika maskaxda iyo quluubta dadka safarka ah.
andBeyond waxay abaalmarinta ku heshay ololaha WILDwatch Live Safaris ee dhiirrigelinta ah, kaas oo la aasaasay intii lagu jiray masiibada COVID iyada oo lala kaashanayo khubarada baahinta duurjoogta WildEarth. Ololuhu wuxuu arkay oo ka gudbay toos toos ah laba jeer maalin walba, saddex saacadood oo safarro dalxiis oo toos ah si ay Afrika ugu noolaato maskaxda iyo quluubta musaafiriinta adduunka. iyo tilmaamaha ka baxsan waxaa la awooday oo loo tababaray inay kaamirada ku wadaagaan dareenkooda duurjoogta iyo ilaalinta.
“Iyada oo loo marayo Abaalmarinta Reigniting Africa, WTM Africa waxay raadineysay macaamiisha dhabta ah iyo hal-abuurka sheekooyinka horseeday ama ololayaal ganacsi oo Afrika u horseeday noloshii muddadii adkayd ee COVID-19. andBeyond's WILDwatch Live Safaris waxay saxday dhammaan sanduuqyada waxayna ku qaylisay xeerbeegtida. Ololaha ayaa si qurux badan loo fuliyay iyada oo loo marayo noocyo kala duwan oo nuxur ah runtiina waxay sii noolaysay jacaylkii safafka Afrika iyo ilaalinta. Waxay sidoo kale caddeysay inay tahay hab cajiib ah oo kor loogu qaadayo maaliyad aad loogu baahan yahay dadaallada dhowridda qiimaha leh, ”ayay tiri Megan Oberholzer, Agaasimaha Portfolio: Socdaalka, Dalxiiska iyo Warshadaha Hal -abuurka leh ee RX Africa (Bandhigyada Reed).
Cape Nature waa kaalimaha u-qalma ee ololaha #Nature Staycation kaas oo ku dhiirri-geliyey socdaalayaasha maxalliga ah inay sahamiyaan dalkooda. Ololuhu wuxuu muujiyey muhiimada ay leedahay ciidaha aan deegaanka u wanaagsanayn iyo ciidaha waara.
“Garsoorayaashu gabi ahaanba way jeclaayeen fikirka #Joogitaanka Nature. Waqtiga ay socotadu dareemeen jahawareer iyo jahawareer ku saabsan fursadaha fasaxa iyo fursadaha, ololahani wuxuu fududeeyay safarka wuxuuna ka dhigay geedi socodku mid dareemaya badbaado iyo ammaan. Waxay dhiirrigelisay kalsooni waxayna si cad u qeexday fursadaha socdaalayaasha, ”ayuu yidhi Oberholzer.
Farshaxanka Ilaalintu ma helin xusid sharaf leh oo kaliya ma aha qiimaynteeda ilaalinta, laakiin sidoo kale xaqiiqda ah in ololuhu diiradda saaray qoysaska iyo carruurta oo u abuuray danjirayaal summad u leh Koonfur Afrika oo ah meel loo socdo.
Ololaha Ilaalinta Farshaxanka Penguin, oo uu naqshadeeyay Jon Monsoon oo kaashanaya waaya -aragnimada dalxiiska ee Airbnb, wuxuu siiyay aragti iyo macluumaad ku saabsan Cape Town iyo qatarta Afrika ee halista ku jira iyada oo loo marayo marti -gelinta webinars -ka tooska ah. Waxay bixisay wax -qabad onlayn ah oo xiiso leh, waxbarashada deegaanka iyo fasal farshaxan oo ku habboon da 'kasta oo guriga ah inta lagu jiro xannibaadda.
“Garsoorayaasha ayaa aad ula dhacay tayada dhammaan soo gudbinta loo helay qaybtan abaalmarinta cusub oo xiisaha badan. Waxay ahaayeen marqaati dhab ah oo ku saabsan xamaasadda, ka go'naanta iyo adkeysiga warshadeena cajiibka ah, ”ayuu ku soo gabagabeeyay Oberholzer.
Suuqa Safarka Adduunka (WTM) Portfolio wuxuu ka kooban yahay dhacdooyin socdaal oo hormuud ah, portals -ka internetka iyo aaladaha dalwaddu ka kooban tahay ee afar qaaradood, oo soo saaraya in ka badan $ 7.5 bilyan oo heshiisyo warshadeed ah. Dhacdooyinku waa:
WTM Afrika laga bilaabay 2014 magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. In ka badan 6,000 oo xirfadlayaal ah oo ka shaqeeya warshadaha socdaalka ayaa ka soo qeyb gala suuqa ugu weyn ee Afrika ee gudaha iyo dibadda. WTM Africa waxay bixisaa isku dhaf la xaqiijiyay ee iibsadayaasha martida loo yahay, warbaahinta, ballamaha horay loo sii qorsheeyay, isku-xirka goobta, shaqooyinka fiidkii iyo booqdayaasha ganacsiga safarka ee la casuumay.
Dhacdada xigta: Isniinta, Abriil 11, illaa Arbacada Abriil 13, 2022 - Xarunta Shirarka Caalamiga ah ee Cape Town, Cape Town
eTurboNews waa bahda warbaahinta WTM Africa.